Ergada Shirka Cadaado oo ansixiyay dastuurka uu yeelanayo Maamulka Gobollada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
June 17 (Mareeg.com)— Ergada shirka Maamulka Maamul u sameynta Gobollada Dhexe ayaa maanta ansixiyay dastuurka uu yeelanayo Maamulkaas, kadib shir ay maanta ku yeesheen magaalada Cadaado.
351 Ergo oo matalayay Beelaha Mudug iyo Galgaduud oo ka qeyb galayay shirka ansixinta Dastuurka KMG ee Maamulka Gobollada Dhexe ayaa waxaa ansixiyay 310 ergo, halka 12 ay diideen 29 ka aamuseen.
Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Farsamada Maamul u sameynta Gobollada Dhexe ayaa ku dhawaaqay natiijada codka loo qaaday, waxaana uu xusay in wixii hadda ka dambeeya la guda galayo waxyaabaha kale ee haray.
Dastuurka KMG ayaa qaba in Maamulka Gobollada Dhexe ay xuduudiisa tahay Gobolka Nugaal, taasoo u muuqata inay meesha ka saareyso heshiiskii dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland oo ahaa in Maamulka Gobollada Dhexe uu noqdo Koofurta Mudug iyo Galgaduud.
Sidoo kale waxaa xuduudaha kale ee uu leeyahay Maamulka Gobollada Dhexe waxaa ka mid ah Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.
Ergooyinka ayaa doodo maalmihii la soo dhaafay ka lahaayeen dastuurka wax ka bedel ku sameeyay qodobo ku jiray, waxaana haddii dastuurkaas loo dhigay sida la isku raacay, waxay mar kale keeni kartaa muran kale oo ka dhasha dhismaha Maamulka Mudug iyo Galgaduud.
Shirka ayaa hadda u gudbi doona wajigiisa saddexaad oo ah xulista Xildhibaanada iyo doorashada Madaxweynaha, waxaana marxalada shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe uu marayaa heer gabo gabo ah.
Dhinaca kale Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa soo dhoweeyay ansixinta dastuurka uu yeelanayo Maamulka Gobollada Dhexe, waxaana uu xusay wixii hadda ka dambeeya loo guda geli doono dhameystirka Maamulkan sida soo xulida Xildhibaanada iyo doorashada Madaxweynaha.